जापान उडानको विषयमा मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन! :: PahiloPost
जापान उडानको विषयमा मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन!
11th June 2019, 05:48 pm | २८ जेठ २०७६
काठमाडौं : राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जापानको ओसाका उडान गर्ने योजना डेढ महिनापछि धकेलिएको छ। निगमले आगामी असार १९ गतेदेखि काठमाडौँ–ओसाका सिधा उडान गर्ने योजना बनाएको थियो।
तर, टिकट बुकिङ कम भएको र पर्यटकीय सिजन प्रतिकुल रहेको भन्दै निगमले निर्धारित उडान तालिका परिवर्तन गरी आगामी भदौँ १२ गते (२९ अगष्ट २०१९) देखि नियमित उडान गर्ने तयारी गरेको हो।
पर्याप्त यात्रु नभएकाले ओसाका उडान तालिका परिवर्तन गरिएको निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए। उनले भने, “जापानबाट उडान अनुमति पाएपछि आवश्यक तयारीका साथ टिकट बुकिङ खोलियो, एक महिनाको अवधिमा पाँच/सात जनामात्र यात्रु भए, पर्यटकीय सिजन सकिएको र जापान जाने विद्यार्थीले पहिले नै अन्य एयरलाइन्सको टिकट लिइसकेकाले पनि यात्रु कम भएको हुनसक्छ। अब मनसुन सकिएपछि भदौ १२ गतेदेखि ओसाका उडान गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ।”
सहायक प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा ओसाका उडाउँदा प्रति उडान दुईतर्फी काठमाडौँ–जापान रु एक करोडभन्दा बढी निगमले आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्छ। अगष्टमा उडान गर्दा निगमलाई राम्रै फाइदा पुग्छ। पर्यटकीय सिजन शुरु हुनका साथै महत्वपूर्ण चाड पर्वको समय पनि भएकाले यात्रुको कमी नहुने निगमको दाबी छ। अगष्टको उडानका लागि अहिले प्रति उडान ७० देखि ८० टिकट बुकिङ भइसकेका सहायक प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीसँग पनि छलफल गरी उनीहरुको सुझावका आधारमा उडान केही पर सारिएको निगमको भनाइ छ।
यता ओसाका उडान सरेको विषयमा नियामक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नै बेखबर छ। मन्त्रालयले के कति कारणले निर्धारित उडान सर्‍यो भनेर ताकेता पनि गरेको छैन। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निगमको ओसाका उडानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।
“जापानको ओसाका उडान सरेको बारे पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाएँ। निगम भित्र के हुँदैछ, राम्रोसँग बुझ्न पाएको छैन, सञ्चालक समितिमा पनि यो विषय छलफल भएको छैन”, उनले भने।
निगमको ओसाका उडानबारे मन्त्रालय र सञ्चालक समितिलाई जानकारी नगराइएका बारे सहायक प्रवक्ता कोइरालाले निगमको निर्णयबारे अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइएको स्पष्ट पारे। निगमले वाइड बडी ए–३०३० जहाजमार्फत् लामो गन्तब्यमा उडान भर्ने योजनाका साथ जापानका विभिन्न गन्तब्यमा उडानका लागि पहल गरेको थियो। शुरुमा अप्रिलमा उडान गर्ने गरी जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो (जेक्याब) सँग उडान अनुमति मागेको थियो तर अनुमति पाउन सकेन।
पछि जुलाई ४ का लागि उडान अनुमति पायो। त्यसअनुरुप आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको थियो। टिकट बुकिङ खुलायो। एक महिनाको अवधिमा काठमाडौँदेखि ओसाका दुवैतर्फ जम्मा पाँचदेखि सात सिट मात्र बुकिङ भयो। उसै पनि घाटा बेहोरिरहेको निगमले थप घाटा खाने गरी तत्काल उडान नगर्ने निर्णय गर्‍यो।
जापानसहितका अन्य लामा गन्तब्यमा निगमका वाइड बडी उडानबारे अझै अन्यौलता रहेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीलाई निगमका लामा गन्तब्यमा उडान भर्नेबारे प्रष्ट धारणा छैन। अनेकौ चुनौतीको सामना गर्दा गर्दै पनि निगमले आफ्नो आफ्नो व्यावसायिक योजनालाई भने निरन्तरता दिएको छ। उसले जापानसँगै चीन, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरियालगायत गन्तब्यमा उडान भर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
निगमले वाइड बडी जहाज हाल पुराना गन्तब्य भारतको नयाँ दिल्ली, बैङ्गलोर, कतारको दोहा, दुबई र हङकङमा दैनिक १० देखि ११ घण्टा उडान गर्दै आएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओसाका कान्साइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको तीन दिन सोमबार, शुक्रबार र बुधबार उडान गरिने योजना छ। निगमले गत माघ १९ गते जापान उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट विमान सञ्चालनको अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) पाएको थियो।
काठमाडौँ–जापान उडानको समयावधि छ घण्टाकोे छ भने ओसाका–काठमाडौँ साढे सात घण्टाको उडान हुनेछ। निगमले अहिले भारतको नयाँ दिल्ली, बैङ्लोर, मुम्बई, मलेसिया, सिङ्गापुर, बैंकक र कतारमा उडान गर्दै आएको छ। निगमसँग अन्तरर्राष्ट्रिय उडानका लागि हाल दुई वाइड बडी ए–३३० जहाज, दुई न्यारो बडी ए–३२० जहाज र एक बोइङ ७५७ जहाज छ।
जापान उडानको विषयमा मन्त्रालयलाई नै पत्तो छैन! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।